हाम्रो जीवन को बाहिर हाम्रो नजिक मान्छे छोड्न गर्दा हामी राम्रो मृतक को स्मृति सम्मान गर्न सम्भव सबै गर्न प्रयास गर्नुहोस्। अक्सर, हानि को आफ्नो भावना, हामी सामान्यतया दफन एक मानिसको ठाउँ मा स्थापित छ जो स्मारक, मा व्यक्त। तिनीहरूले रक सामाग्री र यसको गुणस्तर, रंग र बनावट, आकार र उचाइ भिन्न। तर अधिकांश जीवनकालमा कुनै पनि स्मारक को उचित स्थापना निर्भर गर्दछ। अधिकांश मानिसहरू यस क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु को मद्दत गर्न resorted छ, तर आवश्यक उपकरण संग सबै काम आफैलाई द्वारा गर्न सकिन्छ। कसरी उहाँले लामो समय सेवा गरेको भनेर आफैलाई एक स्मारक स्थापित गर्न विचार गर्नुहोस्।
काम आवश्यकताहरु गर्न
धेरै मानिसहरू यस प्रकारको निर्माण काम सबै भन्दा राम्रो न्यानो महिनामा गरिन्छ भनेर थाह छ। तर सबैले सही गम्भीर मा एक स्मारक स्थापना कसरी र थाह एक महत्वपूर्ण भूमिका मात्र होइन मौसम, तर पनि देशमा आवरण अवस्था प्ले। छ आवेदन समयमा माटो को प्रकृति बाट स्मारक र यसको दीर्घायु को स्थापना को विश्वसनीयता निर्भर हुनेछ। त्यसैले, तपाईं आफैलाई एक स्मारक स्थापित गर्न कसरी प्रश्न अध्ययन मा संलग्न छन् भने, यो महत्त्वपूर्ण राम्ररी व्यापार को सफलता प्रभावित कि कारक जाँच्न छ। स्थिर जमीन जग लागि सबै भन्दा राम्रो आधार छैन, र निर्माण सामाग्री सुक्खामा भन्दा अनुकूल न्यानो मौसम हुनेछ। सही समय छान्ने, तपाईं सुरक्षित सबै आवश्यक सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ।
आफैलाई एक स्मारक कसरी स्थापना गर्ने? सबै काम गर्न उपकरणहरू पाउन त गाह्रो छैन। लगभग हरेक मालिकले बेल्चा, TROWEL, स्क्रैप, TROWEL, mallet, रबर, वा भारी हथौडा, केही Jumpers र, नाप्ने टेप र निर्माण को लागि एक विशेष स्तर पाउन सक्नुहुन्छ। एक वा दुई उपकरण हराइरहेको भने, तिनीहरूले त्यस्तै उपकरण प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। बालुवा, रोडा, सिमेन्ट र पानी झोला धेरै बैग comprises स्मारक को स्थापना को लागि सामाग्री सूची। समाप्त साइटहरु मानक वजन सामान्यतया 100-120 किलो, त्यसैले तपाईं फलदायी हुन केही मान्छे आवश्यक हुनेछ।
स्मारक लागि खाली जग बनाउन
उत्पादन सबै मा-साइट स्थापना को पहिलो एक खोक्रो प्वाल खन्नुहोस् गर्न, जो को चौडाई लगभग एक मीटर मात्रा गर्नुपर्छ आवश्यक छ। माथि यो polutorametrovy Jumpers र (साधारण च्यानल, पुरानो बाड, डंडे को भाग प्रतिस्थापन गर्न सक्छ) superimposed। यो रूपरेखा को चिहान मा एक स्मारक स्थापना र मजबूती एक लामो समय को लागि, उहाँलाई कारण माटो को sagging गर्न prematurely गिर गर्न अनुमति छैन।
अन्ततः झुकाव वा गिर स्मारक सक्छ माप मा पनि slightest त्रुटि - Jumpers र स्थापना स्तर को पर्यवेक्षण सँगसँगै हुनुपर्छ। एक पूर्ण चिल्लो आधार मात्र ढुङ्गा उत्पादनहरु सुरक्षित संलग्न सुनिश्चित गर्दछ। चिहानहरू तिनीहरूले जग मापदण्डहरू अंकन लागि चिन्ह लगाइएको थियो जो पछि स्क्रैप प्रयोग कोण, हेर्न सक्छन्। को earthen embankment सुरक्षित हटाइएको शीर्ष, त्यसपछि अन्य स्मारक को नींव को समग्र स्तर निर्धारण।
stela लागि माउन्ट समर्थन
हामी आफैलाई एक स्मारक सेट गर्न कसरी रुचि भएकोले भनेर। ई, विशेषज्ञहरु, समाधान को मद्दत बिना छ र हामीले आफूलाई तयार छन्। यो एक तरल स्थिरता हुनुपर्छ, पानी, सिमेन्ट र बालुवा को एक न्यूनतम रकम समावेश गर्दछ। परिणामस्वरूप ठूलो स्मारक अन्तर्गत समर्थन लागि स्प्रिंगबोर्ड हुन्छ - यो योजना उचाइ गर्न पूर्व पङ्क्तिबद्ध र समायोजित छ। चिल्लो भएको कोण यस्तो हेरविचार आवश्यक छैन, केवल सतह प्लेट छ। त्यसपछि बेड 25-30 सेमी द्वारा जमीन मा venturing प्रबन्ध मिलाए। सबै काम स्तर संग एक आवश्यक पङ्क्तिबद्ध सँगसँगै छ। समाधान सुक्खा को दर सिमेन्ट जग छिडकाव द्वारा सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि स्मारक को स्थापना अगाडि बढ्नुहोस्।
कसरी आफ्नै एक ग्रेनाइट स्मारक स्थापना गर्न
यस्तो ग्रेनाइट रूपमा सामाग्री को peculiarity, पानी आफ्नो प्रतिरोध। अत्यधिक तरल उत्पादन समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। धेरै ध्यान दिएर हुनुपर्छ उहाँलाई काम गर्न त सामाग्री, यांत्रिक आघात धेरै susceptible छ। यस तयार सेट stele को आधारमा एक धातु पिन संग ठाउँमा यसलाई सुरक्षित। यो अडान एउटा विशेष प्वाल भित्र राखिएको छ र अन्य अन्त कट्टर सीधै संलग्न छ। थप बन्धन समाधान को माध्यम द्वारा हुन्छ - यो जोइन्टहरूमा को क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ र stele समर्थन गर्दछ। ठोस सुकाउने समय climatic विशेषताहरु, हावा गति र वर्ष को समय मा फरक पर्न सक्छ।
संगमरमर को एक स्मारक कसरी एक्लै स्थापना गर्न
एक संगमरमर stele स्थापना प्रक्रिया लगभग कुनै ग्रेनाइट को स्मारक को स्थापना को समयमा समान काम फरक छ। संगमरमर काम यो धेरै ध्यान दिएर प्रदर्शन गर्नुपर्छ किनभने पनि एक धेरै टिकाउ सामाग्री छ, तर। स्मारक पनि पिन भन्दा राखिएको र संयुक्त ठाउँ sverhstoykim गोंद चिकनाना छ। यसले चिसो बाट जोगाउन र सेवा जीवन विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ।
समाप्त डिजाइन सुरुमा धेरै अस्थिर हुन सक्छ। यो दबाबको र बाह्य प्रभावको देखि stele राख्न महत्त्वपूर्ण छ - यो लामो समाधान पूर्ण कठोर छैन रूपमा स्थिर स्थिति रहने गर्नुपर्छ। Seams र दल्नु पानी moistened ठाउँ सिमेन्ट आम जोइन्टहरूमा। सुकाएपछि, तिनीहरूले sanded र superfluous हटाउन गर्नुपर्छ।
सबै मुख्य stele माउन्ट प्रक्रिया पूरा भएपछि, यो 10 14 दिन प्रतीक्षा गर्न लागू गरिएको छ जहाँ समाधान सुक्खा पूरा गर्न आवश्यक छ। यो अवधि पछि, एक फूल बगैचा लागि ठाउँ पृथ्वी ढाकिएको गर्न सकिन्छ - वनस्पति लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न साथ उत्तम गुणस्तर माटो ल्याउन। बरु, देशमा अक्सर स्मारक असामान्य उपस्थिति दिन्छ र चिसो मौसम मा त नीरस खोज्दैन जो बालुवा वा संगमरमर चिप्स, रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अक्सर cased फूल र shrubs भित्र र मुर्ति वरिपरि क्षेत्र, फर्श टाइल्स जमीन पासेसहरू मा राखिएको छन्।
यहाँ यो छ - आफ्नै हात चमत्कार सिर्जना संग घर लागि विचार
यसलाई आफ्नो हात संग बिजुली बनाउन सम्भव छ?
Nik Dreyk (निक Drake), ब्रिटिश गायक-गीतकार: जीवनी, एल्बम
कश्मीरी स्वेटर - ठूलो कुरा
कसरी आवाज परिवर्तन गर्न